Maalgashiga Magaaladda Istanbul wuxuu Helay Saamiga Ugu Weyn ee Miisaaniyadda 2020 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMaalgashiga Magaaladda Istanbul wuxuu Helay Saamiyada Ugu Badan ee Miisaaniyadda 2020
13 / 12 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Maalgashiga mitrooga magaalada Istanbul wuxuu qaatay qaybta ugu weyn miisaaniyadda
Maalgashiga Magaaladda Istanbul Waxay Heshay Saamiga Ugu Badan ee Miisaaniyadda 2020; Madaxweyne Imamoğlu wuxuu baarlamaanka u soo bandhigay miisaaniyada 25.9 ee 2020 bilyan ee Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul wuxuuna ku dhawaaqay inay la wareegeen hoos u dhac miisaaniyadeed oo ah bilyanka 14 bilyan oo dheelitiran iyo deyn mustaqbal ah, isla markaana ay yareeyeen miisaaniyadii 6 bilyan oo gini tan oo gaareysa 4.7 bilyan oo rodol oo ay badbaadiyeen bilyanka 3,2 bilyan. Waxaan ku bixinnaa dhammaan lacagahayaga sharciga ah waxaanna bixinaa mushaarka waqtigeeda. Waxaa intaa dheer, kaalmada bulshada, xanaanada, Halk Süt, 30 kun oo taageero jaamacadeed, sida bilowga xirmooyin badan oo taageero cusub, ”ayuu yiri Imamoglu,“ Waxaad arki doontaa wax qabadkeena dhabta ah wixii hadda ka dambeeya. Hadda waxaan fulin doonnaa tilmaamaha ay bixiyaan muwaadiniintu, ayuu yiri.
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM) shirarkii Diseembar ee 3. Midowgu wuxuu ka dhacay dhismaha Saraçhane iyadoo uu hoos imaanayo madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu. Soo bandhigida Miisaaniyadda Sanadka IMM 2020, Barnaamijka Maalgashiga Sanadka 2020 iyo Barnaamijka Adeegga Sannadka 2020 iyo 2020 - Qorshaha Istaraatiijiga ah ee loo yaqaan 'IMM Assembly', Ekrem İmamoğlu wuxuu sameeyay bayaanno aad u muhiim ah oo ku saabsan aragtida mustaqbalka ee IMM iyadoo la adeegsanayo maalgelinteeda iyo adeegyadeeda.
Waxaa na soo saaray IOM AAN KA bixin karin shaqada "
İmamoğlu wuxuu cadeeyay inay la wareegeen maamulka IMM culays culus oo deyn ah iyo maalgashi go’an bishii June. Waxaan haysan lacag aan ku bixinno mushaaraadka shaqaalahayaga. Ilaa iyo dhamaadka sanadka, sida ku xusan miisaaniyaddii maamulkii hore, waxaan la wareegnay hoos u dhac miisaaniyadeed oo ballaaran oo ah bilyan 26 rodol. Marka 6 bilyan ginni deynta dib-u-bixinta, oo lagu daray dhamaadka sanadka waxay u baahan tahay lacag badan oo ku saabsan bilyanka 7,9 bilyan. Isku soo wada duuboo, waxaan soo qaadanay hoos u dhac miisaaniyadeed oo ah 6 bilyan. Bishii 8 ee ugu dambeysay waxaan maareynay hoos u dhaca 14 bilyan oo rodol. Tan iyo markii dhaqaaluhu qandaraas galay, dakhliga muwaadinka, shirkadaha iyo sidaas darteed canshuurtii ayaa yaraatay. Si kale haddii loo dhigo, dakhliga Dakhliga IMM iyo shirkadaha la shaqeeya ayaa si weyn hoos ugu dhacay. Intaas waxaa sii dheer, dakhliyada guryaha ee la qorsheeyay in lagu garto miisaaniyada. Fooshaani waxay sii socotey bishii labaad ee 6. Waxbadan ayaa jira. Waxaan na bixiyaan qayb ka mid ah Wasaaradda Maaliyadda in la siiyo ka dib markii uu xafiiska la wareegay, hab loo arag taariikhda Turkey, inkastoo uu siiyay horay an on maamulkii hore noo soo diray shaqada aan sameynay. Waxaan maaraynay dhibaatadan weyn, hoos u dhac dhaqaale oo aad u weyn. Bal eeg tan, waxaan u dhownahay dhammaadka Diseembar; laakiin deymannadii deynteenna ma aysan kordhin. Deymanka dib-u-bixinta ayaa weli ku jira heer ah "14 bilyan oo ginni oo aan la wareegnay". Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo aan canshuur iyo deyn ka bixinnay maamulkii hore ee dowladda, haddana waxaan ku guuleysanay guulo waaweyn! Marka maxaan qabanay? Sideen u qabanay ?.
SON WAA DHAMAYSTIN Qashinka ”
Emamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay inay lacag badbaadiyeen, aysan qaban shaqooyin aan loo baahnayn ama aysan meel iska dhigin, waxayna ku guuleysteen xaqiijinta maalgashiga qiimayaasha kuwo aad uga hooseeya sidii loo qorsheeyay.
Markaa waxaan baabi'inay khasaaraha. Waxaan inbadan qabanaynaa. Xusuusnow, wax qorshe ah oo aan u qorsheynay sanadkan ma jirin. Maamulka hore ayaa noo qorsheeyay. Waxaan maaraynay oo keliya wixii ay qorsheeyeen, waxyaabo loo waday si waafaqsan himiladooda iyo ahmiyadooda. Isku soo wada duuboo, waxaan yareynay hoos u dhaca miisaaniyadeed ee 7,9 bilyan ilaa 4,7 bilyan TL. Waxaan ka badbaadnay bilyano ah 6 bilyan oo keliya miisaaniyaddii aan ka dhex aragnay gacmaheena oo la qorsheeyay bishii 3,2 iyo maamulkii hore. Waxaan ku guuleysanay inaan ka amaahanno ku dhawaad ​​2,2 bilyan oo ginni Golaha IMM waxaanna ku maareeyey khafiif ah qiyaastii 8 bilyan ginni. Waxaan sii wadaynaa bixinta deymihii hore. Maalgalintayada midkoodna ma joogsan. Waxaan bilownay kuwo cusub. Waxaan dib u bilawnay dhismaha khadkeena laba-magaalo, 2 sano kadib. Waxaan dhawaan bilaabeynaa mid saddexaad. Waxaan sidoo kale siinnaa kalsooni suuqa. Sababtoo ah qof waliba wuu ogyahay in shaqaalaha cusub iyo kuwa xirfadda leh ee IMM ay si wanaagsan u qorsheeyaan dhaqaalaha. Waxaan bixinnaa dhammaan lacagahayaga sharciga ah. Waxaan ku bixinnaa shaqaalahayaga waqtigii loogu talagalay. Waxaan bilaabeynaa mashruucyo cusub ee la xiriira adeegga bulshada. Xitaa lixdii bilood ee ugu horreeyay dagaalka lagula dagaallamayo saboolnimada magaalooyinka, waxaan awoodnay inaan u qoondeynno miisaaniyad mashaariicda cusub. Waxaan awoodnay inaan bilowno xirmo badan oo taageero cusub ah, sida manfacyada bulshada, xannaanooyinka, mashruuca Halk Dairy, iyo taageerada loogu talagalay jaamacadda 30.000. Waxaannu tan oo dhan samaynnay!
S XAALADAHA UU KA MAHADAN KARO IN LA XIDHIIDHIYO KHUDBADKA ”
Imamoglu wuxuu tilmaamay in miisaaniyaddii la saadaaliyay ee 23,5 bilyan oo ginni oo ka mid ah xiriirada IMM ay rumowday inay tahay 15 bilyan oo ginni oo ay weheliso xakamaynta boqolkiiba 20,5. .
Imamoğlu wuxuu caddeeyey in shirkadahani bixiyaan qayb badan oo ka mid ah deymaha canshuuraha ayna dib u habeeyaan qaar ka mid ah. “Bishii ugu horreysay ee 6, waxaan ku laabanay sawirradan kaabayaasha ah. Tani waa guul weyn. Waxaan bixinay sii waditaan adeeg. Waxaan isbedel ku sameynay ku dhawaad ​​600 milyan wakaaladeena, marka laga reebo İGDAŞ. Wadajir ahaan İGDAŞ, waxaan sanadkaan kudhameynaa faa iidooyin 900 milyan TL ah. Waxaan labalaabi doonaa tan ugu yaraan sannadka dambe. ”
"Waad arki doontaa MARKA NABADA MUQDISHO!
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu xasuustaa in ISBB ay is xakameeyaan isaga oo leh Hayır No esine qaanuunka qiimaha biyaha ee Golaha IMM ee ISKI wuxuuna yidhi, rağmen In kasta oo taasi jirto, waxaan sii wadaynaa maalgashiga ISKI. Waad arki doontaa in sanadka soo socda aan ku gaari doono natiijooyin maaliyad ahaan ku guuleysta İSKİ. IETT, IMM waxay kabtaa taageerada bulshada iyo qiimo dhimista. Waxqabadkayaga ugu weyn ayaa la arki doonaa laga bilaabo hadda. Si kale haddii loo dhigo, sanadka 2020 iyo sanadka ka dambeeya 16 waxay marag ka noqon doonaan sida qorshayaal dawladeed oo cadaalad ah loo wadaago loona maareeyo miisaaniyada Istanbul. Waxaan ku arki doonaa si wada jir ah 2020. Kul
K DENK BUDGET; Ixtiraamka dadka, waxay u tahay magaalada
Imamoglu wuxuu tilmaamay in IMM ay hirgalisay miisaaniyad u dhiganta inta u dhaxaysa 2008 iyo 2000 marka lagu daro xiisadda dhaqaale ee adduunka ee 2013 oo ay ku tilmaantay sanadkii 5 ee ugu dambeeyay musiibo dhanka dhaqaalaha iyo anshaxa.
“Markii aan shaqada joognay, farqiga u soo xarooda dakhliyada iyo wadarta waajibaadka qandaraaska waxay dhaaftay 60 bilyan oo rodol. Waxaan ku maareyn doonnaa fahan leh horumarineysa talaabooyin lagu saxayo maalintan. Us us Annaga, miisaaniyadda macnaheedu waa damiirka dadweynaha. Anaga ahaan, miisaaniyadda waxaa loola jeedaa caddaalad. Ku kaydinta wadada cadaalad ah, cagaar iyo hal abuur Istanbul waxay ka dhigan tahay inaanu waligiis khasaarin. Waxay macnaheedu tahay maalgashiga mustaqbalka mustaqbalka magaalada saint. Ixtiraamka dadka iyo daryeelka magaalada. Furfurnaansho iyada oo la raacayo mabaadii'da iyo qiyamka. Waxaan qorsheynay miisaaniyadeena 2020 fahamkan. Uma oggolaanayno qashin, waxna kuma qaban karno buugaag ama buugag la'aan. Sida aan u maaraynay bishii ugu dambeysay ee 6 ee aan la wareegnay hoos u dhac miisaaniyadeed oo aan caadi aheyn, waxaan sii wadi doonnaa hagaajinta waxqabadka miisaaniyadeena oo aan kordhin doonnaa wax qabad anaga oo aan ka tagin keydka.
2020 SANO BUDGET 25,9 BILLION LIRA
Ekrem İmamoğlu wuxuu cadeeyay inay qorsheynayaan dakhliyada 2020 bilyan ginni iyo kharashaadka ku dhawaad ​​21,3 bilyan ginni miisaaniyad sanadeedka IMM ee 25.9 wuxuuna yidhi, planlıy waxaan qorsheyneynaa dakhligeenna sida 2019 bilyan 12 milyan oo rodol oo la kordhinayo boqolkiiba 21 marka loo eego sanadkii 250. Kharashaadkayadu waxay noqon doonaan 25 bilyan 850 milyan oo rodol. Waxaan lahaan doonnaa dib-u-bixinta amaahda ah ee 4.6 bilyan TL oo naga dhimaysa 3.6 bilyan ee TL-ga ah. Markaan hoos u dhigno amaahda maalgashiga ee hadda ah ee '3.5 billion-dollars', 4.7 macnaheedu waa maalgelin saafiga ah oo loo baahan yahay bilyan ginni. "
KAALMADA LAGU QAADO 5,5 BILLION LIRA
Maalgashiga marka la barbar dhigo 2019 14 billion 139 million rodol 19 bilyan 479 milyan oo ginni ayaa bixin doonta macluumaad ah in Imamoglu, 5 bilyan 487 milyan 9 milyan maalgashi, 483 bilyan 4 milyan 363 milyan 5 milyan Sidaa daraadeed, maalgashiyada joogtada ah ayaa lagu gaari doonaa sida 849 bilyan 319 milyan oo rodol.
GAADIIDKA MACLUUMAADKA METRO
Imamoglu ayaa yidhi, "Waxaan samayn doonnaa maalgashi saafiga ah oo qiyaastii ah 2020 bilyan ginni 10. Waxaan sugeynaa taageeradaada miisaaniyadeena si aan ugu adeegno Istanbul iyo dadka reer Istanbul iyo inaan awood u yeelano bixinta deymaha aan ka qaadnay maamulihii hore iyo maamulladii hore. Ahmiyadaheena maalgashiga, waxaad ku arki kartaa raadadka labadaba rabitaanka 16 milyan ee Istanbulites ee ka soo muuqday qorshaha istiraatiijiyadeed iyo fahamkeena maamul. Gaadiidka, deegaanka iyo la-dagaallanka saboolnimada magaalooyinka ayaa ka mid ah mudnaanta koowaad ee maal-gashiga. Sidoo kale, maalgashiga adeegga caafimaadka iyo bulshada, masiibada iyo maareynta khatarta, iyo maalgashiga waxbarashada iyo dhaqanka ayaa noqon doona aagagga ugu muhiimsan. ”
Emamoğlu wuxuu hoosta ka xariiqay inay qaybta ugu weyn ka leeyihiin maalgashiga gaadiidka iyo tareenka dhulka hoostiisa. “2020, waxaan qorsheynay miisaaniyad maalgashi oo ah bilyan 10 rodol. Waxaan sii wadi doonnaa bixinta amaahdayada. Waxaan sii wadaynaa bixinta deymaha la soo dhaafay. Waxaan dooneynaa inaan si dhakhso leh u gaarno maalmaha ay IMM-da ka hortageyso dib-u-dhaca dhaqaale oo aan sameysanno miisaaniyad u dhiganta. Waxaan rajeynayaa in sanadka soo socda aan gaari doono go'aanka saxda ah anigoo ka wakiil ah 16 milyan oo reer Istanbul ah isla markaana aan maareyn doonno miisaaniyadda saxda ah. ”
KHATARAHA KHUDBADAHA ISTANBUL AYAA LAGU SAMEEYAY IOM'S ROAD MAP
Khudbadiisa, Madaxweynaha IMM-da Ekrem İmamoğlu wuxuu siiyay macluumaad ku saabsan Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee 2020 - 2024 oo loo diyaariyey dadka reer Istanbul. Isagoo ku nuuxnuuxsaday in qorshaha sanadlaha ee Istanbul ee 5 lagu go'aamiyey ka-qaybgal firfircoon oo boqolaal kun oo reer Istanbul ah, xarumo 1.115 ah iyo ururro aan dowli ahayn, İmamoğlu wuxuu sii waday ereyadiisa sida soo socota:
Ğ Waxaan raaci doonnaa tilmaamaha uu muwaadinku siiyay ee ku saabsan halka iyo sida ay Istanbul u aadi doonto safarka sanadlaha ah ee 5. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhammaan muwaadiniinteena kale ee soo sawiray qorshaha '16 roadmap' ee sannadlaha ah ee Istanbul, kaasoo ka tarjumaya rabitaanka 5 milyan ee reer Istanbul iyo mabaadi'da la taaban karo iyo qiyamka IMM ee mas'uuliyadeeda leh si ay u fuliso dardaarankan. Waxay la wadaageen mas'uuliyadda maareeynta Istanbul waxayna yareeyeen culeyskeena. Istanbul waxay ku sii socon doontaa wadadii uu qaaday muwaadinku magaaladuna waxay noqon doontaa meel qurux badan, farxad badan iyo rajo rajo leh oo qofkasta uu ku noolaan karo.
MADAXWEYNAHA Musiibooyinka ISTANBUL, GAADIIDKA IYO DIIWAANKA
Ekrem İmamoğlu, Strategic Plan IMM ee daboolaya habka diyaarinta iyo ka qaybgalka dimuqraadi ah in ololaha dhabta ah "Istanbul Waxaad" adkaynaya in tani ay tahay a horeysay ee taariikhda dalka Turkiga, "Si wada jir ah, waxaana u darbanay qorshe istaraatiijiyadeed inuu ku biiro si suugaanta dawladaha hoose. Dadkeenna iyo daneeyayaasha ayaa ah aagagga adeegga aasaasiga ah ee dhulgariirka, musiibada iyo maaraynta xaaladaha degdegga ah; adeegyada gaadiidka; maaraynta deegaanka; soogalootiga iyo magangalyo-doonka; maaraynta aagagga iyo dib u cusboonaysiinta magaalooyinka. In kasta oo sahankeenna ay daaha ka qaadayaan sawirka weyn ee aragtida laga qabo Istanbulites; iyo aqoon-isweydaarsigayaga ayaa noo suurta geliyey inaan galno madax-bannaanida nolosha magaalada. Natiijooyinkaas oo dhan awgood, waxaan aqoonsanay awoodaha iyo daciifnimada hay'addeenna. Waxaan ku cabiraynaa aragtidayada qaabeysan iftiinka qorshahayaga istiraatiijiyadeed wuxuu u shaqeeyaa sidii "Caadi, Cagaar iyo Magaalada hal-abuurka leh, Istanbul ku faraxsan". Himiladeena ugu weyni waa inaanu shaaca ka qaadno suurtagalka jira ee Istanbul iyo inaanu u helno qof walba oo ku nool magaaladan. Waxaan soo saarnay sideed mowduuc: helitaan Istanbul ah, bay'ad xasaasi ah, soo saarista Istanbul, wadaagida Istanbul, ku noolaanshaha Istanbul, dhaxalka u gaarka ah, joogtaynta dhaqaalaha, ka qeybgalka iyo maareynta hal abuurka ah. Mid kasta oo ka mid ah mawduucyadan ayaa sharxaya himilooyinkeena istiraatiijiyadeed. Xaqiiqdii ma doonayno Qorshaha Istaraatiijiyadda ah ee 2020-2024 inay noqoto tiro aan la fahmi karin oo bogag aan lahayn u dhigma wax ku dhaqan ahaan. 2024, waxaan aqoonsan doonnaa dhammaan aagagga halista leh ee musiibada. Waxaan kor u qaadi doonaa tirada guud ee mashaariicda lagu xaqiiqsaday baaxadda mashruucyada beddelka magaalooyinka ilaa 44. Waxaan kor u qaadi doonaa saamiga gaadiidka nidaamka tareenka ee gaadiidka dadweynaha laga bilaabo boqolkiiba 20,6 illaa boqolkiiba 30. Waxaan kor u qaadi doonaa awoodda xarumaha baabuurta la dhigto ee lagu dhammeeyo 100 kun 94.471 illaa 194 kun 471. Waxaan kor u qaadaynaa aagga cagaaran ee firfircoon halkii qofba mar laga bilaabo 7,04 mitir murabac ilaa mitir labajibaaran 9,04. Isugeynta tirada booska cagaaran waxay kordhin doontaa 30 milyan 872 kun oo 55 mitir oo laba jibaaran. Waxaan ku kordhin doonaa tirada adeegyada bulshada sanad walba laga bilaabo 822 kun 162 ilaa 2 milyan 552 kun 710. Dhammaanteen waxaan ku wada socon doonnaa jidka nabadda iyo farxadda ee Istaanbuul iyadoo qorshahan istaraatiijiyadeed loo diyaariyey annagoo dhagaysi iyo fahmaynayna shacabka gabi ahaanba.
47 Million TL Qalabka Asphalt ee degmada Selendi Degmada Manisa
Miisaaniyadda Sanadka Istanbul 2020
Qorshaha Master ee Gaadiidka Magaalada Istanbul